nepaldoor.com: एउटा अमिलो दशक
‘एक युगमा एक दिन एक चोटी आउँछ’ नेपालीजनमा निक्कै प्रभावी, प्रयोगात्मक र चर्चाको गीतको बोल हो यो । अनेक क्रान्तिका आन्दोलनमा यहि शव्दले मानिसलाई घरबाट सडकमा, सडकबाट राजधानीसम्म धकेलेकै हो । तर, यो शव्दमात्र प्रभावी बनिदियो । एक युगमा उहि दिन धेरैपटक आए । तर, खल्ला र अमिलो अनुभवको थुप्रो बोकेर । समीक्षा नै त भन्न नमिल्ला तर एउटा दशकको अमिलो अनुभवलाई सवैले स्वीकार गर्नैपर्दछ ।
यो दशकको सुरुआती दिनले एकपटक झस्कायो । तत्कालिन राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समाचार लेखेकै आरोपमा २०६० सालमा तत्कालिन शाही सेनाको युनिफाइड कमाण्डले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भ्रष्टाचारमा सेनाको पनि संलग्नताको विषयमा समाचार लेखेकै आरोपमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीको नाममा मारिदिनेसम्मको धम्की पाएको थिएँ । अविचलित पत्रकारिताको यात्रा, त्यसमा पनि व्यक्तिगत मुनाफा विहीन पत्रकारिताको त्यान्द्रोमा झुण्डिएर प्रजातन्त्रको वकालतमा कुनै कसर बाँकी राखिएन, जुन ठाउँमा पत्रकारिताका सुरुआती दिनहरु चलिरहेका थिए ।
सुनिन्थ्यो कयन गाउँहरुमा विद्रोहीका एम्बुस र राज्यका गोलीले परिवारमा विधवाहरु बढिरहेका छन्, टुहुराहरुको संख्या उल्लेख्य हुन थालेको छ । यद्यपि, क्रान्ति जारी छ भन्ने हल्लापनि सुनिन्थ्यो । सहरमा सञ्चारका गृहहरुमा राज्यको सेन्सरसीप पनि चलिरहेको थियो । एउटा कालो दशककको सुरुआती दिन थियो । यस्ता घटना निरन्तर चलिरहेको थियो र केहीहदसम्म मानिसहरु सेन्सरसीपको आदती बनिसकेका थिए पनि । तर, प्रजातन्त्र कुनैपनि बाहनामा स्थापित गर्नुको विकल्प थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुको आन्दोलन, माधव नेपालहरुको सडक जुलुस आउनु नै थियो । आयो, उर्लियो र ६३ को सुरुआती वर्षमा नेपालमा प्रजातन्त्रले फेरि हुर्किने अवसर पायो । निरन्तर, हुर्काउने लहडपनि चल्यो । मुलुकमा प्रजातन्त्रका वकालतीहरुको बहुमत बढ्यो, अन्ततः सैनिक परिचालन गरेको तत्कालिन राज्य उर्फ राजसंस्थाका नेतृत्वदायी ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता खोपी छि¥यो । यहि दशक थियो जसले ऐतिहाँसिक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरेको थियो । शान्ति प्रकृयाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मुलुक शान्तिको बाटोमा उर्लिएको घोषणा गरेको थियो । आम साधारण अव विकासका मुल फुट्ने आशामा, राजनीतिक दलको शासनसत्ताको बलमा लोकतन्त्रको दुहाई दिन थालेका थिए । संविधानसभा बन्यो, भत्कियो । सत्ताको खेल फेरि फोहोरी रुपमा उदायो । र, चारदलीय सम्झौताले निर्दलीय अर्थात् खिलराज रेग्मी सत्ता स्थापित गरी छाड्यो । त्यसबीचमा कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता हस्तीहरु धर्तीबाट नामेट भए । यो दशकको सामान्य ‘समरी’ थियो ।
हिजोदेखि विक्रम सम्वत्को नयाँ वर्षमात्र सुरु भएको छैन । नेपाली जनताले एक दुखद र उपलव्धिविहीन दशक विताएका छौं भन्दा कुनै अन्याय हुँदैन । खासगरी नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रको कालो दशक वित्यो । नेपाली समाजले यहि दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा ठूलो उपलव्धि हासिल गरेको भनिएतापनि व्यवाहारमा त्यो देख्न पाइएन । नेपाली राजनीतिको सवैभन्दा ठूलो र कालो दशकका रुपमा वितेको छ । दश वर्षमा मुलुकको विकास सिंगापुरको भन्दा भयानक गर्ने भनिएर गरिएको ओठे प्रतिबद्धता त्यसै खेर गएको छ । राजनीतिक दलहरु अहिले पनि मुलुक उपलव्धीको मार्गमा नै रहेको घमण्ड गरिरहेका छन् । दश वर्षमा हामी फेरि पनि तीन सय ६० डिग्रिको कोणमा फर्किसकेका छौं । बरु, विकास र सुविधाका हिसावल त्यो भन्दापनि जर्जर अवस्थामा आइपुगेका छौं । ठिक राजनीतिक व्यवस्था उल्टो भइसकेको छ, विद्रोहीहरु अर्बपति र जनताहरु कंगाल भइसकेको अवस्था छ । यस्तो कंगाल जसले विकास र अवसरका सामान्य चिजहरु देख्न पाएको छैन । आफैंभित्र समिक्षा गर्ने हो भने पनि सीमित व्यक्ति बाहेकका लागि यो दशक सुखद देखिएन । उपलव्धिमुलक हुन सकेन ।
उपलव्धि केलाई मान्ने ? ग्रामिण बस्तीमा जर्जर बनेको वेरोजगारी, कृषि उत्पादनमा आएको कमी, वैराग्य मानेर विदेशिएका युवापुस्ताको संवेदना, काकाकुल बनेका सहरवासीको पीडा, दैनिक १८ घन्टासम्म हुन थालेको लोडसेडिङ्, दशकमा मारिएका हज्जारौं परिवारको वेदना, रगतमा लतपतिएर सुकिला देखिन थालेका अनुहार ? प्रश्नमात्र खडा भएको दशकलाई कसरी गतिलो मान्ने ?
सीमा वारी बसेर भारतीय राज्य विहारलाई गाली गर्ने, काठमाडौंका सडक गल्लीमा विहारीको नाममा गाली पहिराउने नेपालीको हविगत लोकतन्त्रले खायो । खासगरी वितेको दशकले निमिट्यान्न बनायो । तर, उही विहार यो दशकमा भारतकै नमुना राज्यका रुपमा स्थापित भयो । राजनीतिमा इमान्दारीता र जनताको आकांक्षा नै विकासको मुल गति हो भन्ने कुरालाई त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले देखाएर छाडे । बरु, नेपालचाँही विहारी गुण्डागर्दी र लुटपाटको पथमा हुर्कियो । आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले पिछडिएको र निक्कै अस्रेल्ल रहेको भारतको विहार राज्य यहि दश वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर गर्ने सवैभन्दा ठूलो राज्यमात्र भएन, यहि दशकमा उसले आपराधिक चरित्रमा हुर्किएको समाजलाई प्रगतिशिल मार्गमा उभ्याउन सफल भयो । तर, हामी धेरैतिर उही राज्यसँगको सीमामा रहेरपनि उसका गतिला र राम्रा शिक्षालाई सिकेर अगाडी बढ्न सकेनौं ।
विडम्बनापूर्वक यी उदाहरणसँग मुलुकको अवस्थाको संश्लेषण सायद अनिवार्य छ । किनभने नेपाली जनजिव्रो मुलुकले के दियो भन्ने प्रश्नमा बेरोजगार बस्न पनि तयार हुने गरेको छ । तर, मुलुकलाई आफुले के दिन सकें भन्नेबारेको चर्चा कहिँकतै हुने गरेको पाइन्न । समाज यतिविध्न स्वार्थी बनिसकेको छ की सम्भावनाका बाटोहरु छाडेर र्तकशिल समाजको पछि लाग्ने गरेको छ । अहिलेपनि हुकुमी र दरबारीया शासन शैलीको पछ्यौटे बनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको मुख ताक्ने र उनले गरेका निर्णयहरुलाई स्वीकार्नेजस्तो कमजोर काममा पनि हामी अभ्यस्त भएका छौं । सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेताहरुलाई ठिक र राम्रो बाटो देखाउने काममा सक्रियता देखाएका छैनन् । नेपाली जनता जहिलेपनि राजनीतिले रोपिरहेको, विजारोपण गरेको झुठको खेती र आश्वासनको बाली हुर्काउनमै अभ्यस्त भएका छौं । यो दशकपनि यसरी नै वित्यो । एउटा मुलुकले दश वर्षमा काया पलट गर्दछ तर हामी दश वर्षमा अझ २० वर्ष पछाडीको भन्दा ध्वस्त अवस्थितिमा फर्किसकेका छौं । जम्माजम्मी २ करोड ६६ लाख जनसंख्या मुलुकमा राखेर पनि शान्ति र विकासको राम्रो स्वास लिन सकेका छैनौं । यो दोष खासगरी परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई नै दिनुपर्दछ ।